Militariga Israa’iil oo duqeeyay fariisimada Xamaas ee marinka Qaza – Radio Daljir
Militariga Israa’iil oo duqeeyay fariisimada Xamaas ee marinka Qaza
Nofeembar 2, 2019 12:53 g 0
Ciidamada Israa’iil ayaa weerar cirka ah waxa ay maanta ku qaadeen saldhig ay lahaayeen Ururka Xamaas.
Wararka ay idaacada Daljir ka helayso deegaanka Khan Yunis ayaa sheegaya in weerarkan ay ku dhaawacmeen laba askari oo katirsan kooxda Xamaas tiro kale oo ilaa iyo haatan aan la shaacina ay ku dhimatay.
Dhaawacyada ayaa waxaa loom qaaday Isbitaalka Nasser ee ku yaala deegaanka Khan Yunis .
Booliska Israa’iil iyo ciidamada ayaa galabnimadii jimcaha ku dhawaaqay in toban “Gantaal” oo laga soo tuuray marinka Gaza ay ku dhaceen hal guri oo ku yaal koonfurta Israa’iil, mana jiro wax dhaawac ah oo ay gaysteen.
Waxay ahayd habeenkii labaad oo isku xigta Gantaallo laga soo tuuray marinka Qaza ay u gudbaan dhulka Israa’iil, iyadoo kii ugu dambeeyayna la soo tuuray 12-kii Sebtember.
Raiisel wasaare Benyamin Netanyahu wuxuu bilaabay wada tashi dhanka taleefanka ah oo uu la yeesho madaxa ciidamadad Aviv Kochavi iyo hogaamiyaasha millatariga iyo amniga si looga wada hadlo qaabab looga jawaabayo gantaalada.
Wasiirka Arrimaha Gudaha DFS oo matabaan lagu wareeray